प्रेमिका नापेको भए जानुस् यो शहर ! यति रुपैंयामा पाइन्छन् यस्तो प्रेमिका ! – Tarai Pahad …
प्रेमिका नापेको भए जानुस् यो शहर ! यति रुपैंयामा पाइन्छन् यस्तो प्रेमिका !
एजेन्सी । एक्लोपनाले धेरैलाई सताउँछ र यसले मानिसलाई समय बिताउन पनि गाह्रो बनाउँछ । एक्लो मानिसलाई जोडी देख्दा उसको साथमा पनि कोहि त्यस्तै साथी होस जोसँग उसले आफ्नो मनको कुरा गर्न सकियोस जस्तो लाग्न सक्छ । सिंगल युवकलाई पनि सुन्दर युवती सँग कुरा गर्न, घुमफिर गर्न लाग्न सक्छ तर उसको चाहना पुरा भएको हुँदैन । तपाई पनि सिंगल हुनुहुन्छ र यस्तै चाहना छ भने अब नआत्तिनुहोस् किनभने तपाईले अब मात्रै १७ रुपैंयामा कुनै सुन्दर युवतीसँग केहिसमय बिताउन सक्नुहुन्छ ।
तपाईलाई पत्यार लागेन होला तर, यो कुरा सहि हो । तपाईले मात्रै १७ रुपैंयामा प्रेमिका भाडामा पाउन सक्नुहुन्छ र यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै नै भाइरल भएको छ । यसबारेमा धेरै जानकारी लिन तपाई पनि उत्सुक हुनुहुन्छ होला । तर, तपाईलाई यो कुरा थाहा पाएर नमजा लाग्ला किनभने यो ठाँउ हाम्रो देशमा नभएर दक्षिण चीनको गुआडोंगमा छ । यहाँ रहेको ‘द भाइटलिटी सिटी मल’को एक स्टोरमा सुन्दर र आकर्षक युवतीहरु पोडियममा राखिएका छन् । यहाँ कोही पनि पुरुषले आफूले मनपराएको युवतीलाई २० मिनेटको लागि १ आरएमबी तिरेर आफ्नो प्रेमिका बनाएर लैजान सक्छ ।
यसको लागि पुरुषले आफुले छानेको युवतीको मोबाइल फोनमा एक क्युआर कोड स्क्यान गर्न पर्छ र पैसा तिर्न पर्छ । एकपटक कोड स्क्यान भएपछि उक्त पुरुषले उसको ती युवतीलाई स्टोरको आसपास र मलमा घुमाउन सक्छ । उसले भाडाको प्रेमिकालाई सपिङको लागि र लञ्चडेटमा पनि लैजानसक्छ । यदि उसले २० मिनेट भन्दा धेरै समय बिताउन चाहन्छ भने उसले दोब्बर पैसा दिनुपर्छ । तर, भाडाको प्रेमिकालाई युवकले चुम्बन गर्न, जथाभावी छुन र मल भन्दा बाहिर घुमाउन लैजान पाँउदैन ।
रोहित श्रेष्ठ र सुशीला तामाङको आँसु झारेकै कारण मनोज डि*शि लाई पर्यो आपत…
युनिक भोजराज बिक र भिम लुहार खाँडादेबी मन्दिर घुम्दै पुजा गुरुङको साथमा
ब्राजिलका युवतीहरु केटाको खोज्न नेपालमा !
हामीहरु थर यसरी राखिएको रहेछ ! जुन थाहा पाउदा तपाइलाई अचम्म लाग्नेछ !
लय,शब्द संकलक तथा गायक राजु पुरिको पहिलो आधुनिक एल्बम “ओइ सानी” भिडियो सहित बजारमा सार्बजनिक ।
गायिका किसु गुरुङ र गायक प्रमोद चाम्लिङ को “छोरीको जन्म ” हेर्नुहोस भिडियो सहित ।
Editor: भिम लोहार
© 2019 Taraipahad.com Designed by Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.. All Rights Reserved